Magaalada Xaafuun waa meel noocee ah?. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Magaalada Xaafuun waa meel noocee ah?.
Magaalada Xaafuun waa meel noocee ah?.
Xafuun (HM):- Degmada Xaafuun ee Gobolka Karkaar waa degmo xeebeed dhacda badweynta Hindia,waa jaziirad la mood,waa magaalo qadiimi ah,waxay kamid ahayd meelaha xebaha Soomaaliya uu degay Talyaanigu,waxay kamid ahayd degaanada ay samaysay dabayshii Tsunamiga ee ka dhacday xeebaha Puntland sanadkii 2004,iyadoo guud ahaan laga guuray halkii ay ahayd magaaladii hore lana degay dhul sare oo banan madaama ay badu qaaday dhismayaashi hore ee magaalada.
Bulshada degaanka degmada Xafuun waxaa ay noloshoodu ku tiirsantahay kulamysiga iyo Xoolaha Nool,waa dhul xoolo daaqsinta ku haboon qaybtiisa birigu waxaana ku nool oo laga dhaqdaa Geele iyo Ariga gaar ahaan idaha oo si mugle ugu dhaqan.
Dhanka waxbaarshada waxay leedahay dugsiga H/dhexe/ sare ee Gen,Cadde oo dibu kicin xoogan lagu sameeyey waxbarashadiisa,iyadoo ay waxbarashada u dareeraan dad dhan 300 qof oo isug jira dadka waaweyn iyo ardayda da’yarta ah,waxaana fasalka sideedaad sanadkan ka qalin jabinaya 13 arday oo u fariisanaya Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland.
Kormeeraha waxbarashada Gobolka Karkaar Mahad Yuusuf Gacayte iyo howlwadeeno ka socday wasaaradda dhexe ee waxbaarshada & Tacliinta sare ee Dowladda Puntland ayaa booqday xarumaha waxbarashada degmada sida dugsiga hoose,kan dhexe iyo dugsiga sare oo dibu-bilaabis lagu sameeyey & goobaha lagu barto Qur,aanka kariimka ah & culuumta diiniga ah.
Mahad Gacayte waxaa uu kulamo iyo wada hadalo la sameeyey Maamulka waxbarashada,Barayasha,Ardayda,gudiga dugsiyada waxaana uu ku booriyey sidii loo dardargelin lahaa nidaamka waxbarashada degmadan si ay ula jaanqaado xarumaha waxbarasho ee gobolka iyo guud ahaan Puntland.
Maamulaha dugsiga Cumar Cali Maxamed oo warbahinta horseedmedia uga warbixyey xaaladda guud ee waxbarashada degmada ayaaa sheegay in isbedel baxad lihi uu ka jiro hanaanka horumineed ee waxbarashada degaanka xafuun “Degaankani waa xeeb waxaa uu kamid yahay meelaha guur-guurka bulshadu sameyso xilli xeebeedyada oo samaynteeda leh,in mudo ah waxaan ku shaqaynayneyn marxalad wanaagsan oo ah mid degan,kororka ardayduna waa soo kobcayaa,marka badda cas laga gafaalo oo xilli xagaaga ah Xafuun waxaa ka dhaca dabaylo iyo cimilo qabow u badan” Cumar Cali Maxamed.
Cumar Cali waxaa uu xusay in dugsigaan uu dhaqaale ahaan ku tiirsanyahay gacan siinta waalidiinta,kabista gudoonka waxbarashada Gobolka iyo taakulo ka timaado Dabwadaag foundation oo ah madal ay hagaan aqoonyahano Soomaali ah.